विप्लवको लेख – प्रचण्ड रणनीति र प्रयोगबारे खुलासा - Dainik Nepal
विप्लवको लेख – प्रचण्ड रणनीति र प्रयोगबारे खुलासा
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ २०७६ वैशाख २१ गते १२:०६
प्रचण्डको एउटा खतरनाक र धूर्त प्रवृत्ति यो छ कि उनले पार्टीभित्र चल्ने वैचारिक–राजनीतिक सङ्घर्षलाई समाजको वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षको स्वाभाविक उपजको रूपमा कहिल्यै लिएनन् ।
उनका विरुद्ध जति पनि सङ्घर्षहरू पैदा हुन्छन्, तुरुन्तै कुनै बाह्यशक्ति र तइभ्वहरूको चलखेल, उक्साहट, घुसपैठको रूपमा अथ्र्याउन पुग्छन् । जब उनका खराबी र विचलनविरुद्ध सङ्घर्ष हुन्छ, तब उनले कुनै गाउँको धामीझाक्रीले अनुमानका भरमा बोक्साबोक्सीको आरोप लगाएर सोझा–सिधा गाउँलेको जीवन समाप्त पारे जसरी, आँखा बटारेर कसैलाई भारतले चलाएको, ‘रअ’ ले उचालेको, कसैलाई पश्चिमा (अमेरिका, ब्रिटेन) ले चलाएको, कसैलाई दरबारले खेलाएको भनेर भ्रम प्रचार गरिहाल्छन् । उनलाई थाहा हुन्छ, यो समस्या आफैँभित्रको वैचारिक–राजनीतिक कारणले पैदा भएको हो तर यो भयो भने आफू समाप्त हुने त्रासले त्यो हुन दिनुहुँदैन भन्ने उनको सिद्धान्त रहिआएको छ ।
यो साँचो हो कि यदि जे हो, त्यही रूपमा अन्तर्सङ्घर्ष र दुईलाइन सङ्घर्ष रहने स्थिति हुँदो हो त उनको धूत्र्याइँ उहिल्यै समाप्त भइसक्थ्यो । सायद नेपाली क्रान्तिले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्दैनथ्यो ।
प्रचण्डहरूले हाम्रोबारेमा जे–जति भ्रम–प्रचार चलाएका छन्, तिनको बारेमा अब धेरै कस्साकस्सी गर्नुपर्ने देखिँदैन । क्रान्तिको प्रवाहमा परेर ती एकपछि अर्को स्वतः धुजाधुजा हुँदै गएका छन्,
दोस्रो कुरा, क्रान्तिकारीहरू कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रवादी र मित्रशक्तिहरूसँग बाहेक साम्राज्यवादीहरूसँग जोडिन पुग्दा ध्वस्त हुन्छन् भने आत्मसमर्पणवादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरू साम्राज्यवादीहरूसँग नजोडिँदा ध्वस्त हुन्छन् । क्रान्तिकारीहरूको जीवन र विजय क्रान्ति र क्रान्तिकारी भाइचारा सम्बन्धमा हुन्छ भने आत्मसमर्पणवादीहरूको जीवन साम्राज्यवादीको दयामायामा निर्भर हुन्छ । यसर्थमा पनि नेपाली क्रान्तिमा क्रान्तिकारी शक्ति र धारा साम्राज्यवादी तइभ्वहरूसँग जोडिने सम्भावना नै रहँदैन र छैन पनि ।
प्रचण्डहरू आज कसरी दिनरात विदेश भ्रमणमा लाजशरम पचाएर कुदिरहेका छन्, कसरी विदेशी मालिकसामु जीवनरक्षाको याचना गरिरहेका छन्, कसरी सत्तास्वार्थका लागि चाकरीमा जुटिरहेका छन्
यदि, कुनै तरिकाले यो साम्राज्यवादी तइभ्वहरूसँग जोडिन पुग्यो भने जोडिएको दिनमा नै क्रान्ति ध्वस्त हुन पुग्छ । तर, आत्मसमर्पणवादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरू भने आफ्नो फाइदा, स्वार्थ र अस्तिइभ्वका लागि साम्राज्यवादी तइभ्वहरूसँग नजोडिएर सुखै छैन, जसको नाङ्गो क्रियाकलाप प्रस्टसँग देखिरहेका छौँ । प्रचण्डहरू आज कसरी दिनरात विदेश भ्रमणमा लाजशरम पचाएर कुदिरहेका छन्, कसरी विदेशी मालिकसामु जीवनरक्षाको याचना गरिरहेका छन्, कसरी सत्तास्वार्थका लागि चाकरीमा जुटिरहेका छन्, कसरी साम्राज्यवादीका अरबौँ रिूपयाँमा नाचिरहेका छन् यति नै बुझ्दा पनि प्रस्ट भइहाल्छ, को विदेशीसँग झुण्डिएर बाँच्न बाध्य छ !
विश्वका हरेक कुनामा विद्रोही र क्रान्तिकारीहरूको रगत लतपतिएको छ । महान् समाजवादी क्रान्तिहरूमा पनि क्रान्तिकारीहरूको रगत बगेको छ तर बलिदानले न क्रान्ति रोकिएको छ, न त बलिदानको त्रासले नै क्रान्तिबाट क्रान्तिकारीहरू पछि फर्किने कुरा आउँछ ।
पाँचौँ कुरा, क्रान्तिको यात्रा बलिदानीपूर्ण हुन्छ, यो कुरा सत्य हो । कुनै पनि क्रान्तिले केही न केही मूल्य नचुकाएर सफलता हासिल गर्न सक्दैन । के सामन्तवादविरुद्धको क्रान्तिमा पुँजीवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूले बलिदान गर्नुपरेको थिएन र ? के फ्रान्सको क्रान्तिदेखि ब्रिटिस, अमेरिका, रुस, चीन, भारतका क्रान्तिहरू बिना–बलिदान पूरा भएका थिए ? के नेपाली विद्रोह र सङ्घर्षहरूमा नै बलिदान भएको थिएन र ? निश्चय नै भएको थियो । विश्वका हरेक कुनामा विद्रोही र क्रान्तिकारीहरूको रगत लतपतिएको छ । महान् समाजवादी क्रान्तिहरूमा पनि क्रान्तिकारीहरूको रगत बगेको छ तर बलिदानले न क्रान्ति रोकिएको छ, न त बलिदानको त्रासले नै क्रान्तिबाट क्रान्तिकारीहरू पछि फर्किने कुरा आउँछ ।
क्रान्तिमा प्रभाकरण पनि बन्न सकिन्छ, लेनिन, माओ र फिडेलहरूले हासिल गरेको विजय पनि पाउन सकिन्छ । यसको लागि हरदम आफूलाई तयार राखेर नै क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिको जिम्मेवारी उठाउने हो । हामी त्यसका लागि तयार भएर नै एकीकृत जनक्रान्तिको मार्गमा अगाडि बढेका छौँ । सच्चाइ यो पनि छ कि आत्मसमर्पणवादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूले न प्रभाकरणको जोखिम लिनुपर्छ, न त क्रान्तिको महान् गौरव नै प्राप्त गर्न पाउँछन् । उनीहरू केवल भौतिक सुखको लालचमा मालिकहरूको दास हुन मात्र योग्य हुन्छन् ।
संविधान संशोधनको शर्तमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन सत्तामा गएका हौँ : उपप्रधानमन्त्री यादव